किशोर श्रेष्ठ र दिपक बोहोराको गोप्य टेलिफोन कुराकानी बाहिरियो , रबिलाई कहाँ र कसरी ठेगान लगाउनु पर्छ…त्यो मलाइ थाहा छ। – Life Nepali
किशोर श्रेष्ठ र दिपक बोहोराको गोप्य टेलिफोन कुराकानी बाहिरियो , रबिलाई कहाँ र कसरी ठेगान लगाउनु पर्छ…त्यो मलाइ थाहा छ।
काठमाडौ । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले सञ्चालन गर्ने ‘सिधा कुरा जनतासँग’का प्रोड्युसर दीपक बोहराबीच भएको टेलिफोन कुराकानी बाहिरिएको छ । कुराकानीमा श्रेष्ठले प्रोड्युसर दीपक बोहराको निकै झाँको झारेको सुनिएको छ । वार्तामा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘‘मैले चाहेमा तपाईंहरुलाई मिनेटमै सिध्याउन सक्छु तर म त्यो गर्दैन ।’’ श्रेष्ठले आफू रवि लामिछानेको शुभेच्छुक नै भएको बताउँदै भनेका छन् । ‘‘अनावश्यक पंगा नलिनुस् । आचार संहितामा बस्नुस् ।
सिद्धान्तमा बस्नुस् । गरेर खानुस् । मेहनत गर्नुस् भनेको हो कि होइन ? मैले कोडअफ कन्डक्ट हेर्ने हो । अमेरिका छोडेर नेपाल आएर प्रेसपास लिनुस् पहिले नै भनेको हो कि होइन ?’’ अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘‘तपाईं रविको कुरा नगर्नुस् ।आफ्नो कुरा गर्नुस।रवि लाई कहाँ कसरी ठेगान लगाउनुपर्छ वा उकास्नुपर्छ ? त्यो त मलाई थाहा छ’’, भनेको वार्तामा सुनिएको छ । कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बारम्बार अ*नभेरिफाइड स्टोरी कसैले पनि प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने सुझाएका छन् । आफ्नो रातो पासपोर्ट प्रकरण को कुरा उठाउँदै सोधेका छन्, ‘‘रातो पासपोर्टको बारेमा मसँग बुझ्नु भो, मलाई सोध्नु भो ?’’
Previous ११ वर्षिया भाइरल नानी इन्द्रेणीमा
Next ११ बर्षिया दोहोरी गाउने नानीको घरमै पुगे शिशिर, आर्थिक अ*वस्था क*मजोर देखेपछि नानीको स्कुल फि ति*र्दिए>>>भिडियो